Fandehanana data amin'ny iPhone, fivezivezena mora foana | Vaovao IPhone
Pablo Aparicio | | iPhone, iPhone 3G, Fampianarana sy torolàlana
La laza miriaria Ny fahaizana mandefa sy mandray vaovao amin'ny tambajotra finday ankoatry ny fotodrafitrasa ataon'ny mpandraharaha eto amintsika. Rehefa mivoaka any ivelany isika dia azo inoana fa tsy manana antennas ao amin'ny firenena alehantsika ny mpikirakira anay ary, raha te hankafy ny antso sy ny serivisy data, dia mampiasa ny antennas an'ny mpandraharaha iray ao an-toerana.
Raha tsy misy ny fivezivezena mavitrika dia azo inoana fa tsy ho afaka hifandray amin'ny Internet na hanao antso any ivelany isika, noho izany dia tsy maintsy ataontsika izay hananantsika azy io raha mandeha manao vakansy any amin'ny firenena isika. ny mpiasanay dia tsy manana fotodrafitrasa.
Ny safidy roaming data dia tsy mandeha amin'ny laoniny, ka raha mila miala amin'ny firenena ianao dia tokony hampavitrikao azy amin'ny fanaovana izao manaraka izao:
Ahoana ny fomba hampiasana ny roaming data
Ireto no dingana tokony harahinao hankafizanao ny mandeha amin'ny iPhone:
Andao ho any Fikirana amin'ny iPhone.
Nilalao izahay Data momba ny finday.
Hitantsika ny roaming data sy navotsotra ny switch.
Fandehanana data, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Miriaria, manomboka ny 1 Jolay 2014 dia tsy misy sarany fanampiny ho an'ireo mpampiasa raha mifindra any amin'ny firenena misy ny Vondron'olona Eoropeana isika, saingy mbola misy ny sarany ho an'ny firenen-kafa. Mbola ianao ihany fehezin'ny Vondrom-piarahamonina eropeana ny tahan'ny ary amin'ny tranokalan'izy ireo http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming-tariff dia lazain'izy ireo amintsika hoe ohatrinona ny vidiny farany azon'ny mpandraharaha ampandoavina anay amin'ny fampiasana ny tolotr'izy ireo ivelan'ny firenena.
Araka ireo angon-drakitra ireo, manomboka amin'ny 1 Jolay 2014 "ihany" dia afaka ampangaina € 0,19 / min isika. ho an'ny antso am-peo, € 0.05 / min. ho an'ny antso ho avy, € 0.06 isaky ny hafatra fohy (SMS) ary € 0.20 / MB amin'ny internet. Na izany aza, mieritreritra aho fa ny Roaming dia zavatra iray voaisa ny andro. Tsy ho vitsy izy ireo, fa ho avy ny andro izay ahafahantsika mampiasa ny findaintsika amin'ny firenena rehetra nefa tsy hampiakatra ny faktiora.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 3G » Laza miriaria
saimonx dia hoy izy:
Ity safidy ity dia tsy mandaitra raha tsy hoe mandray mpandraharaha avy amin'ny firenena hafa ny iPhone. Raha mbola any amin'ny firenenao ianao dia tsy maninona izay anananao fa hampifandray anao izany.
Mamaly an'i saimonx
Ary amin'ny FAMPANDROSOANA - Mahazo DATA-PUSH? tsy ilaina izany mba hamono azy io koa?
Ampiharo ny tantara, izay mololo ho antsika, 15 andro tao Munich aho ary ny zavatra nahagaga ahy, 173,19 € ny angon-drakitra misimisy kokoa momba ny faktiorako.
kaiz dia hoy izy:
Fa raha ampahavitranao izany safidy izany raha mbola any amin'ny firenenao dia tsy hifandray koa izy io?
Mamaly an'i kaiz
carafa dia hoy izy:
Mamelà ny tsy fahalalako ... fa eo anelanelan'ny fanehoan-kevitra sasany sy ny hafa dia nampifangaro ahy ianao.
Inona no tokony hataoko mba tsy hifandray mihitsy IZY? Na any ivelany na any Espana.
Inona no tokony hataoko mba hifandraisany isaky ny ora X hijerena ireo mailaka? Misy ifandraisany amin'izany ve ny safidy Push?
Mamaly an'i Carafa
_BoRcH_ dia hoy izy:
Azonao antoka fa manan-kery ho an'ny vahiny ihany io safidy io? Efa nanao ny fanamarinana tao anatin'ny Espana ve ianao?
Mamaly amin'ny _BoRcH_
Beatriz Buritica dia hoy izy:
Misy fampianarana tena tsotra (disable edge / 3G) izay navoaka tamin'ity pejy tena tsara ity tamin'ny 21 Jolay. Avelao ny iPhone amin'ny sandoka VPN ary eny dia mandeha izy. Nahazo faktiora lafo aho noho ny tsy fanajanonana io asa io fa tsy mamela ahy hiditra amin'ny Edge intsony. Ity dia miasa ho an'ny 2 mafy rehetra
Valiny tamin'i Beatriz Buritica
Milamina ve izany ???… Handeha hitsangatsangana aho amin'ny herinandro ambony. Raha tapaka io safidy io, raha te hanamarina ny mailoko aho na hahita pejy, hifandray amin'ny tambajotra Wifi mandingana ny 3G ve izany? Notsapaiko tao anatin'ny Espaniôla io ary mitohy mifandray amin'ny 3G… Heveriko fa, araka ny nolazaiko tamin'ny fanehoan-kevitra iray, dia nianjera izany rehefa nahafantatra mpandraharaha vahiny iray. Ny safidy hafa dia ny fametrahana ny «Airplane Mode» ... saingy mazava ho azy, lany ny antso ...
…. Zavatra hafa ... Raha tsy mifandray amin'ny 3G izy dia tsy hifandray amin'ny GPRS koa, sa tsy izany? Efa matahotra aho ...
RafaelGMM dia hoy izy:
Manana olana aho, na mety tsy izany, ho hitanao:
Manana IPhone 2G aho miaraka amin'ny vodafone navoaka tamin'ny firmwar 1.1.4
Napetrako ao anaty kiheba RED EDGE ny masontsivana GPRS -VAOZANA napetraka APN, USER AND PASSWORD ho an'ny vodafone ary mifandray amin'ny internet, browser Safari sns aho ary mandeha tsara
Manana ny fikandrana VPN tsy voalamina aho
Ny fanontaniako (olako) dia rehefa manontany amin'ny faktiarako amin'ny alàlan'ny telefaona (mbola tsy tonga an-taratasy) ny habetsaky ny "Data" hoy ny 0,00
Izany tokoa ve? Midika izany fa mbola tsy naheno ve izy ireo? na rehefa tonga ny faktiora vodafone dia hampandoaviny vola aho noho ny "data" fitetezana
Tiako ny hevitra iray, arahabaina daholo
Valiny amin'i RafaelGMM
15 andro tany Chine aho. Atsaharo ny EDGE ao amin'ny BoosPrefs ary tsy hifandray amin'ny alàlan'ny GPRS izany, manana iPhone voalohany aho.
Vahaolana iray hafa ny fametrahana azy amin'ny maody fiaramanidina, saingy tsy afaka mampiasa telefaona ianao.
Ho an'i Andres sy ny hafa:
Tany Kroasia nandritra ny herinandro aho ary notapahin'izy ireo ny filahako rehefa niverina aho. Antony: Nandany 370 euro tamin'ny fivezivezena tamin'ny angona aho. Notapahin'izy ireo ny filaharana satria araka ny nolazain'izy ireo tamiko rehefa mihoatra ny vola iray ianao dia tsy maintsy mandoa vola 500 euro ianao mba hankafizanao ilay tsipika indray, raha tsy izany dia notapahin'izy ireo izany. Nandoa ny 500 euro aho (inona no azoko atao?) Ary amin'ny fiandohan'ny taona dia haverin'izy ireo amiko. Ka nanavotra ny tsipika aho, fa ahoana kosa ny 370 euro? Hita fa namorona tolotra Telefonica tamin'ny volana jolay ho an'ny mpampiasa Iphone rehetra, ary hatramin'ny 31 desambra izao, rehefa misy fihenam-bidy 80% amin'ny vola laniana amin'ny fivezivezena. Ka ny vazivazy dia manodidina ny 80 euro teo ho eo no nivoaka. Ambonin'ny zava-drehetra, MAMONJY NY ROOTING DATA! rehefa lasa any ivelany ianao dia mifandraisa amin'ny wifi.
Salama, nitety an'i Eropa nandritra ny 15 andro aho ary naharay faktiora 215 euro niaraka tamin'ny ankamaroan'ny antso sy hafatra tao amin'ny Roaming, saingy ny zava-misy dia ny nampikatsoako azy. Ny zavatra tsy notapahiko dia ny 3G sy ny Toerana. Mety ho izany ve no antony?
Mieritreritra ny handray ny Nokia taloha aho amin'ny manaraka ...
Salama, tiako ho fantatra raha hampihetsiketsika ahy amin'ny volavolan-dalàna ve izy ireo rehefa mampandeha ny angon-drakitra ???? !!!!!! ary raha hofoanako io dia hivoaka ho marina foana foana aho na tsy maintsy foana asio amin'ny maody fiaramanidina sao maka signal !!!!!!
EDGAR MENDOZA dia hoy izy:
Salama tiako ho fantatra tsy misy, azoko atao aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone hampiasana azy amin'ny karatra SIM AT% T, dia ny Movistar Venezoela no mpiasako voalohany, ary hijanona mandritra ny 3 volana any Etazonia aho ary te hividy finday. att alla mba hahazoana azy ary puce na sim ary ampiasao amin'ny iphone-ko ... tiako ho fantatra raha azo atao ... miarahaba sy misaotra mialoha
Valiny amin'i EDGAR MENDOZA
Marka dia hoy izy:
Izaho dia manana Apple iphone 3G Black (8GB) (AT&T) NAHASOA / NAPOHONANA ary eo amin'ny efijery dia milaza fa VOAFIDY / VOAFANA anaty boaty mena izay midika hoe… tsy maintsy apetrako io
mia13 dia hoy izy:
Salama, manana ny iPhone 4 aho ary nahita ny fanehoan-kevitra ary mieritreritra aho fa raha milaza amiko izy ireo fa tsy maintsy sokafana ny angon-drakitra mandehandeha any ivelany, midika ve izany fa tsy maintsy halefa eto?
Tsy azoko, satria manana kilema aho ary manana 3G sy ny zava-drehetra
Raha ampodiko io dia handeha haingana kokoa ve ny 3G sa zavatra toy izany?
Na izany na tsy izany, ho an'ireo olona manana faktiora lehibe toy izany, hoy aho fa raha adala izy ireo (tsy misy fanafintohinana) satria tonga aminao ny IPhone tsy mandeha amin'ny laoniny dia azonao atao ny manova azy
Mamaly an'i mia13
Nefa andeha hojerentsika, nahazo fiampangana ambony aho noho ny fampandehanana ny roaming. Saingy hita taratra ao amin'ny volavolan-dalàna ny hetsika rehefa voasakana ny finday, izany hoe tsy ampiasaina. Mino aho fa tamin'izany vanim-potoana izany dia tsy naharay hafatra mihoatra ny dimy aho ary tsy nisy mailaka satria tsy manana an'io safidy io aho na dia iray aza ireo sary masina nampidiriko. Ary farany azoko ny fiampangana isaky ny 2 ora marina tsara mandritra ny dimy andro, izay no nijanonan'ny volavolan-dalàna.
Ahoana no hitrangan'izany raha tsy tsy mampiasa Internet mihitsy aho ary mijanona eo amin'ny efijery an-trano ny finday nefa tsy mampiasa sary masina. (tonga ny fiampangana adiny 2 na dia amin'ny alina aza amin'ny marain'ny maraina rehefa matory aho) raha misy afaka mamaly ahy ……. misaotra
NEOline dia hoy izy:
Mba hanazavana kely ilay lohahevitra, heveriko fa tokony ho "lojika" kely kokoa ianao:
Adinoy ny momba ny roaming data, sns.
Raha any ivelany ianao: ATAONAO tanteraka ny 3G sy ny DATA MOBILE !!!
Ho an'ireo rehetra izay manana matetika ny iPhone miaraka amin'ny wifi, Bluetooth, 3G ary ny fitaovana rehetra ampiasaina foana, raha any ivelany ianao, dia esory daholo ny zavatra rehetra, raha tianao, ny WIFI, torohevitra ho ahy, fa aorian'ny fahatahorana.
Valiny amin'ny NEOline
ram dia hoy izy:
Ny olana dia notapahiko ny zava-drehetra ... ary tsy manana wifi akory aho!
ao amin'ny Samsung Galaxyxi data data roaming dia tsy mandeha. Te-hampandeha izany aho saingy milaza amiko izany amin'ny vidiny lafo, efa voaloa mialoha ny drafitra ataoko
Salama daholo! Any Italia aho, fantatro ny volavolan-dalàna mety hitranga amiko, notapahako ny data roaming, ny data finday ary ny 3G, ny Wi-Fi ihany no ananako…. Ny olako dia ny wifi an'ny trano misy ahy tsy mifandray, mahazo ny onja aho rehefa mifandray fa tsy manana fifandraisana tena izy, tsy fantatro raha mila mampifandray sy manamboatra ny VPN aho ... na misy zavatra tsy mety ataoko koa ve ... ampio !! Misaotra anao
Niampanga ahy 236 euro izy ireo satria tany Andorra nandritra ny 3 andro.
Ahoana ny fomba hanafoanana izany ao amin'ny Nokia-C6.
Manana taham-pahamendrehana hitety 24 ora amin'ny telefaona aho, vodafone aho ary ampidirina io safidy io…. Misy sarany amiko ve? sa mandoa ny sarany fotsiny? MISAOTRA
DIKAN'NY ALEX FERNANDO dia hoy izy:
Salama aho fa manana CONCERN aho, manantena aho fa afaka manampy ahy izy ireo dia nitondra ahy AIFON 6 avy any SHANGAY ary niseho aho ALETRA «R» MANARAKA ny famantarana ny POERADOR dia tsy fantatro satria ary raha manana olana koa aho miaraka amin'ny INTINERACY DATA I Manantena aho fa afaka manome ahy Misaotra anao noho ny fiheveranao
Valio amin'i ALEX FERNANDO MEAN